Kuchecheudzwa – Rabhi Michael Avraham
Responsa > Category: Philosophy > Kudzingiswa
mwanakomana Yakabvunzwa makore matatu apfuura
Unoona sei panharo dzinopikisa kudzingiswa? Kuti mwana munhu anofanirwa kuve nesarudzo yekuti achaita here kana kuti kwete zviito zvisingadzoreki pamuviri wake, kuti mubatanidzwa unoisa mwana munjodzi uye kuti kazhinji zvakafanana nekucheka zamu kuvasikana (maererano nenharo yehutano)
Nharo dzakadaro dzinogona kupesana nemaitiro ekudya, dzidzo nezvimwe zvakadaro. Hapana kutiza pesvedzero yevabereki paupenyu hwemwana. Saka kunyangwe dai chikumbiro chiri chechokwadi hachishande. Vabereki vanofanira kuita zvavanogona maererano nokutenda kwavo kwaari. Kunyanya, kana akura, sarudzo yekuita mubatanidzwa ichamukuvadza uye kumuomera.
mwanakomana Akapindura makore 4 apfuura
Asi inzira isingadzoreki inopesana nekudya uye tsika dzedzidzo
mikyab123 Akapindura makore 4 apfuura
Kwete chokwadi. Zvose hazvidzokeri shure. Semuyenzaniso, dzidzo inoiendesa kunzvimbo inopesvedzerawo sarudzo yekuchinja nzira.
Dr. Akapindura makore 4 apfuura
Padzidzo zvinogona kutaurwa kuti zvinodzokororwa asi chikafu hachidzokerike.
Dhanieri Akapindura makore 4 apfuura
Zvakare kusadzingisa pazera remazuva masere isarudzo isingadzoreki. Hapana achakwanisa kudzorera kumwana uyu mazuva ehudiki aaive ari kunze kwesungano.
A Akapindura makore 4 apfuura
Sei iyi iriyo chete nyaya iripo kubva pakunzvenga kwarabhi kuenda kumutumbi wenyaya mhinduro hadzina kusimba uye hadzisi serious. Zvimwe zvinoyeuchidza nezve Ultra-Orthodox apologetics munguva yedu.
ד Akapindura makore 4 apfuura
A, zvirokwazvo. Asi cherechedza kuti akanyora "kunyangwe kana theoretically akarurama" uye chete ipapo akataura kuti hapana imwe sarudzo uye zvinhu zvose hazvigoneki, nezvimwewo. Asi mhinduro chaiyo ndeyekuti murairo wekuchecheudzwa unodarika kukosha kwekuzvimiririra kwemwana asina pfungwa.
R. Akapindura makore 4 apfuura
Mukuona kwangu, mhinduro yacho yakasimba uye yakarurama uye hainzvereki.
Pine Akapindura makore 3 apfuura
Tichitevera kubva munyaya iyi, ndaifunga kuti ndichawedzera kuti pane dambudziko pano pakati pekukosha kwekuzvimiririra kwemunhu pamusoro pevana vake uye ukuru hwekukuvadza kumwana. Kudai kwaiva kukuvara kwakakura kwazvo (kwakadai sokudimburwa gumbo kana ruoko) pangadai paine nzvimbo yekushandisa kumanikidza kudzivirira tsika iyi nevasingatendi mazviri (sekumanikidza munhu kuti asazviuraya kunyangwe aine kuzvitonga pamusoro pemuviri wake). Asi panyaya yokuchecheudzwa, kukuvara kwacho kuduku uye kukosha kwokuzvitonga kwevabereki kunoratidzika kuva kwakakupfuura (sezvinongoita munhu asingamanikidzwi kurega kusvuta kunyange zvazvo ari kuzvikuvadza). Saka kunyange avo vasingatendi mukukosha kwekudzingiswa, havafaniri kunyima avo vanotenda mazviri. Kazhinji, vanhu vanogona kudzidziswa murunyararo vachipesana nezvinonzi "barbaric" maitiro.
Hongu, inongwarira sekod On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
Pakati pe'vanokoshesa vanarabhi' uye kusimbisa kwete On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
Haredi mumoyo On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
Daniel Sagron On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)